Foomamka Leedhka Ma Dhinteen? | Martech Zone
Foomamka Laydhka Ma Dhinteen?
Axad, Oktoobar 23, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Jenn Lisak Golding
Jawaab gaaban? Haa
Uguyaraan xagga dhaqanka, iyo "dhaqameed" waxaan ula jeednaa dalbashada macluumaadka soo booqdayaasha kahor intaadan bixin qiimaha, ama adeegsiga waxyaabaha udub dhexaad u ah sida dhiirigelin ah.
Aynu dib u dhigno gaadhigaas taariikh ahaan:
Shaqadeenna ka caawinta macaamiisha inay kordhiyaan beddelaaddooda internetka, waxaan ogaanay hoos u dhac weyn, isdaba-joog ah oo ku yimaada booqdayaasha websaydhka oo buuxinaya foomamka hoggaanka dhaqanka. Sabab wanaagsan ayaa jirta taas.
Habdhaqanka iibsadaha ayaa isbedelaya, badanaa sababta oo ah tiknoolajiyada, macluumaadka iyo isku xirnaanta ay iyagu heli karaan waxay ku sii kordhayaan isbeddellada iyo dib u qaabeynta dhaqankooda.
Natiijo ahaan, iibsadayaashaadu waxay noqdeen kuwo aad uga aqoon badan, garasho badan, dalbanaya, oo mashquuliya. Isku soo wada duuboo, iyagu waa gebi ahaanba aan la dhicin nuxurka ma guurtada ah taas oo inta badan seegta calaamadda ciddiyaha baahidooda, danahooda, ama halka ay ku jiraan safarka wax iibsiga.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gated' oo sifiican u shaqeynayay waqti aan fogayn (waan ku eegaynaa, waraaqo caddaan ah iyo ebook) hadda waa dhiirrigelinno aad u xun oo lagu helayo macluumaadka xiriirka qof.
Haddii aad ka fikir mareegahaagu inuu yahay iibka dijitaalka ah (sida ay tahay inaad yeelatid), nuxurka ma guurtada ah ee lagu rusheeyey foomamka leedhka wuxuu la mid yahay iibiyaha iibiya kaasoo wadahadalkiisa ku dhawaaqaya, wuxuu u eg yahay rikoodh jaban, wuxuuna u bixiyaa isla codka-dhagaha la 'rajo kasta oo ka gudbeysa jidkiisa. Ka soo horjeed taas oo ah iibiyaha iibiya ee su'aalaha weydiiya, dhageysta, oo keena jawaabo waxtar leh. Qof loo xusuusto inuusan ahayn iibge riixis ah, laakiin la taliye lagu kalsoon yahay iyo wadahadal wanaagsan. Taasi waa waxa ku jira is-dhexgalka ay bixin karaan.
Isdhexgalka runti ma shaqeeyaa?
Mawduucyada isdhexgalka ayaa abuuraya 94% beddelaad dheeraad ah source
Mawduucyada is-dhexgalka waxay abuurtaa 300% macaamil macaamil sare source
Mawduucyada isdhexgalka waxay abuuraan 60% haynta sare ee macluumaadka. source
Mawduucyada is-dhexgalka waxay abuurtaa 500% xog dheeri ah oo la soo ururiyey. source
Laba sababood oo aan dooneyno inaan ku adkeyno:
Macluumaadka loo habeeyay danahayga iyo meesha aan ku jiro nidaamka wax iibsiga ayaa had iyo jeer qaylin doona, "qabashada-dhan" waxyaabaha loo diyaariyey inay ka farxiyaan qof walba, meel kasta. (Dhamaanteen waan ognahay sida iskudayada looga farxiyo qof walba u shaqeeyo. Ma ahan.)
Dhakhaatiirta neerfaha ayaa noo sheegaya “maskaxda reptilian”(Naanays loogu talagalay qaybta maskaxda ee wadista dabeecadda miyir la'aanta iyo go'aanka ugu dambeeya ee go'aamada) waa mid aad u sarreeya muuqaalka, iyo waxyaabaha ka maqan kicinta muuqaalka ayaa aad uga waxtar yar.
Sheeko yar oo lagu taageerayo qodobkan dambe: Mar baan macmiil ku tijaabinay xog-farsameyn ka dhan ah warqad cad, mid walbana wuxuu fadhiyaa gadaashiisa foomka hoggaanka. Waraaqda caddaanku waxay heshay eber beddelaad ah, halka jaantusku uu goostay 100% soo gudbinta. Ma dooneysaa in maskaxdaas reptilian-ka ah ay tallaabo qaado? Ka dhig mawduucaaga muuqaal ahaan ku adkeynaya, Pete dartiisa.
Dacwadda ka-goynta dariiqa beddelashada duugoobay ma aha in la dilo foomamka gebi ahaanba, laakiin waa u jiidi macaamiisha khibradaha is dhexgalka taas oo dhista aaminaad isla markaana soo gudbisa qiimaha ka hor intaadan weydiisan ballan-qaad ballaadhan sida wadaagista macluumaadka xiriirkooda. (Sidaad udhaqmi lahayd taariikh hadaad rajaynayso inaad hesho taariikh labaad.)
Waa maxay nooca is-dhexgalka ee intaas samayn kara?
Tusaalooyinka waxyaabaha la wadaagayo waxaa ka mid ah:
Jadwal ballanta - Ku martiqaad rajooyinka tijaabada-wadista astaamaha ama dheefaha adoo sameysanaya ballan
Qiimaynta - Ku soo dhawaaw baahiyahaaga shaqsi, una soo gudbi talooyin waxtar leh
Xisaabiyayaasha - Ka caawi iibsadayaasha inay qiimeeyaan qiimaha
chat - 1: 1, Caawinta waqtiga-dhabta ah sida macaamilku u qiimeynayo iibsashada
Wadada Caadiga ah / Promos - Qalabka khaaska ah, talooyinka ama dallacaadaha ku saleysan doorbidka iibsadaha, taariikhda, ama iibsashada asaagga
Hubinta degdegga ah - Ka saar caqabadaha iibsiga adoo caddaynaya inay hadda iibsan karaan iyo in kale
Instant Win - Ku dar dhiirrigelinta xiisaha
Is-dhexgalka Macluumaadka - Infographics leh walxo is-dhexgal ah sida dhaqdhaqaaq iyo walxo dalbanaya sida muraayadaha macluumaadka ama fiidiyowyada
Ku bixi adiga oo isticmaalaya tweet / share bulshada - Ku abaalmari martida marin u helka markay la wadaagayaan waxyaabahaaga shabakadooda warbaahinta bulshada
Qormooyin - U oggolow dadka soo booqanaya inay tijaabiyaan oo ay soo bandhigaan aqoontooda
Sheekada Microsites - Microsites-ka khadka tooska ah ku socdaala ee booqdaha ku dhex mara bogagga iyo fiidiyowyada illaa loo beddelo
yacni - Ku qanciso xiisaha ay qabaan una muuji inta ay ogyihiin
Video - Show iyo sheeg
Markaad qorsheyneyso waxyaabahaaga is-dhexgalka ah, waa waxtar in maskaxda lagu hayo wadayaasha cilmi nafsiga ficilka booqdaha booqdaha iyo isticmaalka nuxurka. Hoos waxaan ku taxnaa dhowr, oo laga amaahday saaxiibbadeen at Foomamka Laydhka Ayaa Dhintay:
Weli way wareersan tahay waxa tani u egtahay ficil ahaan? Waa tan guide anfacaya, oo aad "ku bixin karto tweet" si aad uhesho dhadhanka is-dhexgalka hoggaaminta-gen.
Hubi Hagaha Isdhexgalka
Kahor intaanan kala bixin, waxaan rabaa inaan qirto oo aan siiyo macmiilkeena-sare shan ah wada-hawlgalayaasha waxyaabaha wadaagga ah—Muhammad Yasin iyo Felicia Savage ee PERQ. Kooxdooda waxay soosaarisay softiweer maadad softiweer ah oo kakooban si ay websaydhkaaga ugu bedesho iibiyaha dhijitaalka ah, taas oo ay tahay inaad sameyso baadhid iyo demo, stat.
Codso Demo ee Software Content interactive
Waa maxay noocyada ka kooban is-dhexgalka, haddii ay jiraan, aad la soo kulantay? Waa maxay fikirkaagu ilaa iyo hada? Wadaag hoose oo aan iska caawinno midba midka kale.
Daah-: PERQ waa macmiil noo ah hay'adda.
Tags: Content Suuqwaxyaabaha la wadaagayosoftware ka kooban is-dhexgalnoocyada is-dhexgalkawaayo-aragnimo is-dhexgal ahfoomamka leedhkafoomamka rasaasta ayaa dhintayPERQ
AdPushup: Xakamee oo Hagaaji Naqshadahaaga Ad
Sidee Qabashada Lead Lead Digital